I-China New Design SmileKit Sula Imichilo Yokukhiqiza kanye Nefekthri | I-White Technology
I gama le-brand: I-SMILEKIT
Igama lomkhiqizo: Izicucu Zokubamhlophe Kwamazinyo
Ukunambitheka: I-Mint Flavour/Eyenziwe ngokwezifiso
Igama elingukhiye: amazinyo amapheshana abe mhlophe, amapheshana amazinyo
Ukusetshenziswa: Ikhaya Lansuku zonke
Isicelo: Izinyo Lekhofi,Izinyo Likagwayi,Izinyo Elinsundu
1 Ibhokisi Lifaka: 7 Izikhwama/Izingcezu eziyi-14.14 Izikhwama/28 Izingcezu.customizable
Isikhathi sokuthumela: Izinsuku ezingu-3-7
Isithako: Okungeyona I-Peroxide/6%hp.Okwenziwe ngokwezifiso
Igama lento Amazinyo Abamhlophe Imivimbo
Umusa I-Mint / OEM
Umbala OEM / Blue
Isevisi I-OEM iyatholakala . ibhokisi kanye nencwadi yencwadi yomsebenzisi konke kungenziwa ngendlela oyifisayo
Izitifiketi CE GMP MSDS
Indlela Yokuthumela DHL , EMS , Fedex , TNT , Ngomoya , Ngasolwandle
Isikhathi sokuthumela Izinsuku ezingu-1-3 ze-oda elincane, izinsuku ezingu-12-20 ze-oda le-OEM
Amathiphu athile awusizo okuthola imiphumela ehamba phambili:
1. Ungabhemi, noma uvape, ngenkathi kufakwa imichilo.
2. Zama ukungaliphuzi ikhofi, itiye, iwayini noma iziphuzo ezine-carbonated.
3. Sincoma ukuthi amakhasimende asebenzise imicu emhlophe isikhathi esingaphezu kwemizuzu engama-30.
4. Kunconywa ukuthi ukuxubha amazinyo ngemva kokusebenzisa imichilo emhlophe ukuze kukhishwe noma iyiphi insalela.
Khetha I-Teeth Whitener Engcono Kakhulu:
Susa amabala ashumekiwe ajulile avezayo
Thola amazinyo amhlophe abonakala emhlophe ezinsukwini eziyi-14.
· Zithembe ngokwengeziwe ngokumamatheka okumhlophe.
· Vimbela ukwakheka kwamabala amasha
· Amazinyo amhlophe ngaphandle kokubangela
· Isilinganiso esifakazelwe ngokomtholampilo samathunzi ama-3
mhlophe ezinsukwini eziyi-14.
I-Coconut Activated Carbon, Amafutha kakhukhunathi, i-Peppermint, i-Polyvinylpyrrolidone.
Empilweni, amazinyo amaningi amhlophe kudingeka ahlanganiswe nezinye izinto ukuze enze amazinyo abe mhlophe. Nokho izinyo ezimhlophe emapheshana azidingeki ukuhlanganisa nezinye izinto. Vele udabule iphakheji, uyibeke emazinyweni, futhi ungaqala ukwenza amazinyo akho abe mhlophe. Kulula kakhulu, futhi, Whitening izithako ingakhethwa ngokusho emakethe yakho, ukugxilisa ezahlukene hydrogen peroxide, ukugxilisa ezahlukene carbamide peroxide, Ungaphinda ukhethe izingxenye zemvelo okumsulwa amazinyo amalahle mhlophe powder, noma ezinye izithako, singanikeza ukukhiqizwa mass. Amakhasimende amaningi afuna ukwenza owawo umkhiqizo emakethe, akunankinga, singakusiza. Kumakhasimende anomkhiqizo wawo, sisekela ukwenziwa ngokwezifiso kwemikhiqizo nokupakishwa, uma umklamo wekhasimende ungalungile, akunankinga, singasiza amakhasimende aklame ukupakisha mahhala.
Okwedlule: Imichilo Emhlophe Eyi-5D Yamazinyo
Olandelayo: I-SmileKit Sula Amazinyo Amhlophe Imicu
Imichilo Yokucwenga Kwamazinyo Okuthuthukile
Imichilo Emhlophe Engcono Kakhulu
Geza Amazinyo Ngemva Kwemichilo Emhlophe
I-Burst Coconut Whitening Strips
I-Burst Whitening Strip
Imivimbo Emhlophe Yamazinyo
Imivimbo Emhlophe Yamazinyo Emvelo
Imivimbo Emhlophe Yemvelo
Imivimbo Yegwebu Elicwebe Amazinyo
Amazinyo Abamhlophe Strip
Imivimbo Engcono Kakhulu Yokucwenga Amazinyo
Amazinyo Amhlophe Ijeli kanye namathileyi, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, Ukugcwalisa Ijeli Elimhlophe Amazinyo, Ikhithi ye-Led yokucwenga amazinyo, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, I-Ismile Home Teeth Whitening Kit Gel Led Light,